I-Boat House Cottage - I-Airbnb
I-Boat House Cottage
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFitzroy
Le ndlu yangasese inebhedi ephindwe kabini, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iTV yentambo, ishawa / igumbi lokuhlambela elinemeko yomoya. I-Tyrell Bay sisiseko esifanelekileyo sokuhlola isiqithi sonke ukusuka okanye ukubamba isikhephe sokukhwela kwesinye isiqithi.
Le ndlu ithambile kwaye icocekile kwaye ibekwe kumgangatho ongaphezulu. Kwinqanaba lepatio, unokuyonwabela ikofu yakho yasekuseni ngombono omkhulu wolwandle kunye neenqanawa, ujikelezwe zizityalo zam ezonwabileyo kunye neentyatyambo!
Indlwana yam ingaphaya kolwandle eTyrell Bay kwaye ikufutshane nePizzeria, iSlipway Restaurant, iLambi Queen Restaurant, iiyadi ezimbini zamaphenyane kunye nabo bazokuntywila kwi-scuba dive, iLumba Dive Shop.
Umbuki zindwendwe ngu- Fitzroy
Ndiyafumaneka ukwenza undwendwe lwam luhlale lukhumbuleka kangangoko ndinako nangayiphi na indlela endinokunceda ngayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tyrell Bay